अब सवारी धनीले ब्लुबुक बोक्न नपर्ने, कसरी हुन्छ चेकिङ्ग ? जान्नुहोस - सिधा मिडिया
अब सवारी धनीले ब्लुबुक बोक्न नपर्ने, कसरी हुन्छ चेकिङ्ग ? जान्नुहोस
९ श्रावण २०७८, शनिबार २१:२१ मा प्रकाशित
551 जनाले पढ़िसके
बागमती प्रदेशले यातायात व्यवस्था सूचना प्रणाली लागू गरेसँगै अब सवारीधनीले साथमा ब्लुबुक बोकेर हिड्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । अब ब्लुबुकका लागि सेवाग्राहीले क्युआर कोर्डको प्रयोग मार्फत सेवा लिन सक्ने भएका हुन ।अब ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एप प्रयोग गरी सेवाग्राहीको भुक्तानीसम्बन्धी विवरण चेकजाँच गर्ने छन ।
जसका लागि सेवाग्राहीले राजस्व भुक्तानी पछि प्राप्त हुने उक्त क्यूआरकोर्ड हुन्छ सोही क्युआर कार्डलाई स्क्यान गरी ट्राफिकले ब्लुबुक चेकजाँच गर्ने र सेवाग्राहीको सम्पुर्ण जानकारी लिन सक्ने छन् ।
अनलाइन प्रणालीको उद्घाटन गर्दै बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव सञ्जिव बरालले ब्लुबुक बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त भएको बताए । उनका अनुसार अब राजस्व भुक्तानी पछि प्राप्त हुने क्यूआर कोडका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले मोबाइल एपको प्रयोग गरी भुक्तानी विवरण चेकजाँचका गर्न सकिने उनको बताए ।
यो सँगै अब लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सेवाग्राहीले एक पटक भने यातायात कार्यालय पुग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि दोस्रोपटकबाट सबै सेवा अनलाइन मार्फत लिन सकिने छ ।
टिएआईएस सिस्टमले अनलाइनबाट राजस्व तिर्न, ब्लुबुक र लाइसेन्स नविकरण, चेकजाच लगाएत सम्पुर्ण काम कारवाहि अनलाइनबाट हुँने सेवा उपलब्ध गराएको छ ।